Izitoyitoyi zithi kawabanjwe amatomu okhetho nonyaka - Bayede News
Indlela yokuphila ngeke isefana ngenxa yokhuvethe, asamukele
Angeke siye nganxanye singemanzi kodwa umbono omuhle lo asikubeke eceleni ukuthi uvela kubani. Kaningi siyalahlekelwa ngokukhahlela into noma ngabe inhle ngoba simelene nomnikazi wayo. Izwe lishayekile kakhulu ngenxa yokhuvethe kanye noHulumeni okhohlakele ngakho-ke kungonga imali uma kungavotwa kanyekanye. Lokhu kungaphikiswa i-ANC kuphela ngoba ifuna ukudla imali. – nguSimo Frank
Ngiyaweseka lo mbono we-EFF. Lo nyaka uzophela amaqembu ombusazwe kanye nomphakathi nje jikelele bengazihlelile kahle. Izinqumo esingazithatha ekuqokeni amaqembu angasihola zingahle zithathwe ngenxa yemizwa. – nguChris Ntuli
UMnu uMalema ubeke iphuzu elihle kakhulu uma sizobheka isimo esibhekene naso kulesi sikhathi nanokuthi amaqembu awanalo ithuba elanele lokukhankasa kanye nokuphepha kwabantu emigqeni emide. – nguMbongeni Hopewell Shange
Khona kungaba yinto enhle ukuthi ukhetho luhlanganiswe. Kodwa la makhansela akhethwa ngowezi-2016 ngiyawabonga noma angaphuma kungangeni muntu ezikhaleni zawo siyokwazi ukuphila ngaphandle kwawo. – nguNtengu’s Man Mthobela KaBbe
Juju uyaboniswa ntangayethu, ukube kuya ngami ngabe uhamba nobuNazaretha. Le nto yokhetho vele ngeke yenze lutho ngoba vele amakhansela asazobulawa ukhuvethe bese kuqalwa phansi futhi. Akulindwe sibone ukuthi kosala obani bese sithi abangenele lezi zikhundla. – nguMathole Ntombela
Ngiyawuzwa umbono weqembu ngeso lesimo esibhekene naso ngakwezempilo kodwa amakhansela asiphethe njengamanje awasisizi ngalutho. – nguBheki Ntoyoksula Mncube
Eqinisweni uMalema ushiswo isimo asibukayo. Ukhuvethe ludla lubi. Kungani zivaliwe izinto eziningi, ukhetho luzongahlehliswa ngasiphi isizathu maqondana nezokuphepha? – nguMtheh Mayor Chilliza
Bachita umbono wezitoyitoyi
Ngiyasizwa isiphakamiso somhloli we-EFF kodwa sizoshayisana nomthetho wezokhetho othi akumele kuphele izinsuku ezingama-90 emva kokhetho lokugcina kungakhethiwe. Lokho kuyodinga izichibiyelo kulo mthetho wezokhetho. Kodwa futhi ngakolunye uhlangothi ngingamvumela ekutheni ukhetho luyadinga vele ukuthi luhlanganiswe. Lokhu ngikusho ngalezi zizathu, uMengameli okhona njengamanje unoHulumeni ababili kwabathathu abangene ngaphansi kwakhe koHulumeni Bezindawo kusasebenza owashiywa uMengameli osaphuma. Lokho kwenza ukugejana kulabo Hulumeni bese thina bahlali singayitholi ngendlela intuthuko. – nguSphamandla Khuboni
Cha umdlalo omuhle awuqhubeke sesichathe sichathile sicela nolwangowezi-2024 lusondezwe lube kulo nyaka. Sifuna ukuqeda masishane sife sivotile asisenzeli thina sesenzela abasemva kwethu lo mhlaba akuwona owethu owabangasekho nabasazozalwa kumele sife sisilungisile isimo vele siyafa kucacile. Sofike sithini kobabamkhulu, sokhomba ziphi izibazi ekubeni bona bafa bevikela umhlaba wethu banikela ngegazi labo uma kungavotwa kungcono sibulawe bukhoma. Akuvele kuliwe kube kanye ngeke sikhathele sifuna ukuvota, sifuna ukukhipha ontabakayikhonjwa. – nguThemba Shabalala
Iyaxaka le nto ye-EFF. Iqembu eliqhakambisa inqubomgomo yokugcinwa nokuhlonishwa komthetho. Izigqaja ngokuba nezifundiswa ezinhlakeni zayo futhi iyayikhuthaza imfundo. Kufanele engabe yazi kangcono ukuthi uMthethosisekelo olawula ukhetho kanjalo nezinguquko ezingenziwa ngokusingathwa kokhetho zizolawulwa ukuguqulwa kwawo. Manje yenza sengathi kukhona okumele abekwe icala. Akushintshwe uMthethosisekelo uhambisane nalo mbono wabo. – nguSfiso Mshengu
Sengiqala ukungabaza manje ngaleli qembu. Lento yokuthi akuhlanganiswe ukhetho lukazwelonke nolwendawo ngiqale ngayizwa ikhulunywa i-ANC manje isikhulunywa uMalema. Asivume ukuthi umholi we-EFF akaphikiswa okushiwo uyena konke kuhle eqenjini lakhe, nokuthi ku-EFF kukhala isicathulo somuntu oyedwa. – nguSbonga Hlophe Kangozane
Uma kudunguzela inhloko ekhaya wonke umuntu uba nosizi kanye nomunyu nigcine nithatha izinqumo ezingaphusile ngenxa yokuzama impilo yalo osuke edunguzela. Njengamanje akukho okungaphuma kumalungu e-EFF okusile, inkulumo kaMalema ingakhele esinye isithombe ngaye. – nguSigcino Sibiya Cosmos
Asiyeni nje asidingi kukhankasa vele siyazi siyovotela obani. Ofuna ukukhankasa zikhona izinkundla zokuxhumana zihambisa ngokokushesha futhi zishibhile. – nguNomvikelelo Kawula
Bayasangana laba, bayesaba ukuthi idolobhakazi IGoli nePitoli lizothathwa uMnu uMashaba we-Action SA. – nguDumisani Myeni